hapana sirivha Nhema
Inowedzera kutyaira kubva pamakiromita gumi nemashanu pakuchajisa, kusvika mamaira makumi matatu pamuchaji.
hapana Sekondari Bhatiri (Kaviri Kuchaja) (+$516.00)
Tranzit Go - Kuwanda kwemagetsi
The Tranzit Go chimurenga inopetwa Simba Wiricheya yakagadzirirwa kugadzirisa hupenyu hwevashandisi pasi rose. Imwe yeyakareruka kurema kupeta magetsi maguru, pa56 lbs chete, izvi wiricheya rakagadzirwa nekutakura mupfungwa. Kutora chete masekonzi mashoma kupeta kuita compact 14 ”, iyi wiricheya inosimudzira kuzvimirira, kufamba uye nyaradzo. Yakagadzirwa kune yekunze nekunze kufamba, iyo yakanakisa kutendeuka nharaunda inoita kunetseka pamusoro penzvimbo dzakasimba kushushikana kwekare! Ichi chigaro chichauya kwauri zvakanyatsounganidzwa uye ne12.5 ”akasimba akavhurika matai emahara, kukakavara pamusoro pekugona kwetaya rakaputika hakuchisina kunetseka!
Tranzit-Go Simba Wiricheya UPC #